राजु नेपाल राजु नेपाल संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भइसकेको छ। विगतका सरकारले झैँ यो पटक पनि सरकारले विभिन्न नाराका साथ अनेक कार्यक्रम ल्याएको छ। संसदीय व्यवस्थाको गुण र दोषको रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारमा सामेल दलहरूले निकै प्रशंसा गरे। विस्तृतमा पढ्नुस्
भारती पोखरेल भारती पोखरेल खोकी लागेको धेरै दिन हुँदा पनि निको नभएर डाक्टर जचाउन पुगेकी राम्री मगर विस्तृतमा पढ्नुस्
सम्पादकीय सम्पादकीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विविध कारण देखाउँदै सरकारको वार्ता आह्वान इन्कार गरेको छ। सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गरेको ४ दिनपछि बिहीबार मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा 'वार्ताको वातावरण नबनेको' जिकिर गर्दै असहमति जनाएको हो। विस्तृतमा पढ्नुस्
गुणराज लुइँटेल गुणराज लुइँटेल प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेको ९ बुँदे सहमतिले सिर्जना गरेको जटिल अवस्थातर्फ मुलुक गइरहेको छ। तत्कालका लागि ओलीको सत्ता जोगियो तर यसले छाड्ने दुष्परिणाम मुलुकले दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्ने निश्चित छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
शोभाकान्त झा शोभाकान्त झा जन्मभूमि र स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। हामी जुन जमिन र समाजमा जन्म लिन्छौँ, त्यसका लागि के गर्छौं? त्यस जन्मभूमिप्रति कस्तो व्यवहार गर्छौं? हाम्रो कर्तव्यनिष्ठाको झलक हाम्रो दैनिक व्यवहारमा झल्कनुपर्छ। स्वर्गभन्दा प्यारो जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्यबोध सबैमा हुनुपर्छ। विस्तृतमा पढ्नुस्
विश्वास नेपाली विश्वास नेपाली नेपालमा अहिले पनि जो जमिनमा एक पाइलासमेत टेक्दैन, ऊसँग जमिन सम्पत्ति अथाह छ। उत्पादनयोग्य जमिनमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सामान्य सीपसमेत नभएका वर्गसँग अथाह जमिनको स्वामित्व छ। यसो हुनु भनेका कृषिप्रधान देशका लागि सुहाउँदो विषय पक्कै होइन। विस्तृतमा पढ्नुस्
सम्पादकीय सम्पादकीय झन्डै आधा कोटी मान्छे बस्ने उपत्यकामा सबैभन्दा ठूलो समस्या पिउने पानीको रहेको छ। मानव जीवनमा नभई नहुने पानीको माग उसै पनि अधिक हुने भइहाल्यो। माग अधिक भएपछि मूल्य बढी हुनु र गुणस्तरमा चलखेल हुुनु पनि नेपालजस्तो फितलो अनुगमन हुने मुलुकमा… विस्तृतमा पढ्नुस्
डा.सरोज धिताल डा.सरोज धिताल 'आर्थिक विकास' यतिबेला धेरैको थेगो बनेको छ। यसैलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रका, राजनीतिक पार्टीका, विभिन्न संस्थाका नेता भन्दैछन्। जनता सुनिरहेका छन्। कोही अविश्वासमा रिसाएर 'इस्' भन्दैछन् कोही भने 'हो त नि!' भन्दै पनि छन्। तर, के हुन्छ… विस्तृतमा पढ्नुस्
रामचन्द्र भट्टराई रामचन्द्र भट्टराई गणतन्त्र दिवस मनाउने विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको छ, त्यसको मूल आयोजक समिति पनि गठन गरेको छ। जो हिजो गणतन्त्र विरोधी थिए, संघीयता विरोधी थिए, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रका विरोधी थिए, उनैले अहिले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। र, त्यही… विस्तृतमा पढ्नुस्
संघीय नेपालमा कराधिकार
रूप खड्का रूप खड्का नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ जसअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरेर तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था छ। यी तिनै तहका सरकारलाई सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ भने त्यसका लागि चाहिने राजस्व परिचालन गर्ने अधिकार पनि… विस्तृतमा पढ्नुस्
StartPrev…34567…NextEndPage5of 505	भर्खरै...